Izifo eziningi ukuthi ukuthuthukisa emzimbeni, kungabangela ukulunywa babulawa futhi soreness kwesikhumba. Imizwa enjalo imbangela ukungakhululeki, kude nokuthula futhi wenze khona babulawa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene nezingane njalo ecwaninga indawo silume, ngenxa isikhumba kwakhiwa izilonda, yoqweqwe notwayi olunegazi futhi ukukhubazeka elikhanyayo (kwalokho itheleleke).
isimo esinjalo kubonisa iphutha emzimbeni wethu - izoliziba kakhulu kabi akukhuthazwa futhi kuyingozi. Esihlokweni lanamuhla sizozama ukuphendula umbuzo obalulekile abafundi abaningi: "Kungani njengokubatshwa kwezindlebe zabo, imilenze ngezansi kwamadolo?" kungase kuhluke imvelo Izizathu - utawufundza inkinga.
imisipha ukulunywa ithole - uphawu varicose emithanjeni
Ngokusho Odokotela Phlebology, ezingaphezu kuka-70% amacala lezi zimpawu abonisa isifo incipient - varicose emithanjeni. Ekuqaleni lesi sifo hhayi njengoba ukulunywa kabuhlungu, kodwa kamuva isithombe emtholampilo isiba bazolokhu (emini, ebusuku). Emithanjeni zigcwala phezu kwesikhumba babe umthunzi cyanotic futhi kakhulu emibi imilenze yakhe ngezansi ngamadolo.
Uma ungeke ukwazi ngokushesha zisebenza isikhungo sezokwelapha, bese uzama zokudambisa izimpawu eyabo ngosizo kokucindezelwa amasokisi amade, nemphumela sculpting. Underwear kuthuthukisa kwegazi futhi aqede ukungakhululeki. Le ndawo ethintekile kufanele luphathwe okhilimu hormone. Emva amanzi okugeza gcoba isikhumba necebo wavuma acid (boric acid, kalamula, buhlanjululwe ngamanzi).
Kungani njengokubatshwa kwezindlebe zabo, imilenze ngezansi kwamadolo, okuyinto okufanele asolwe? Ngokuvamile imbangela yalesi simo banal ukusabela iguliswa imithi, amakhemikhali yasendlini, izitshalo noma imikhiqizo. Ngokuvamile, isiguli, ngaphezu ukuqubuka obomvu livela amehlo zamanzi, sneezing, amanxeba okusha silume ku imisipha ithole.
Komzimba - iyisifo okungathí sina okudinga ukuphathwa ngendlela ekhethekile. Kodwa okokuqala, kumelwe uthole indlela ongama sicasulwa ukuhlolwa. Ngokuvamile, udokotela ekunika antihistamine ngaphakathi nangaphandle.
Izimo zethu zihluke kakhulu isifo ezingavamile ephelezelwa izimpawu jikelele zokudakwa, izinga lokushisa (kufika ku 40C) okwandisa, ubuhlungu zibe maholoholo nezimagqabhagqabha phezu lamathole izinyawo. Isiguli kakhulu imilenze ukuvuvukala silume ngezansi ngamadolo. Izimbangela isifo zinomsuka ezithathelwanayo. Ngokuthi ekhethekile uhlobo streptococci (hemolytic), eyaziwa nangokuthi i-ejenti causative izifo eziningana: sepsis, imfiva ye-rheumatism, imfiva ebomvu, angina.
I ngaphambili yokwelapha okuhleliwe, ukusimama kuphumelele kakhulu. Ekwelapheni eziyinkimbinkimbi ukufaka ejenti elwa namagciwane ukusiza ukuvimbela recurrences olwengeziwe. Ezimweni ngazinye, kungase kudingeke Physiotherapy. Izinyathelo zihlanganisa ekuhambisaneni umzimba inhlanzeko.
imilenze silume ngezansi kwedolo: izimbangela
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngokuvamile izinkinga ezifanayo ezihlobene ne hypovitaminosis, ikakhulukazi abesifazane, njalo nokukhawulela ngokwakho ekudleni. imenyu Lean phuca emzimbeni kubalulekile izakhi zamakhemikhali lapho umsebenzi izitho zangaphakathi kuncike. Ezinye ngisho nokuwabona ukuthi ukuntuleka izakhamzimba Uphatha kabi ukubukeka kwesikhumba, izinwele, okubangela ukoma, flaking kanye ukulunywa.
Abaningi bakhala ngokuthi kukhona imilenze obukhulu futhi silume ngezansi ngamadolo. Izizathu amanga ekudleni. Kulandela isici ayeke ukunisa angabhekwa a ukungalingani hormone. Kuyinto evamile ngaphezulu kwabesifazane abakhulelwe abesifazane ukuya esikhathini.
Ukusebenzisa Vitamin eziyinkimbinkimbi, amalungiselelo hormone nokunakekela kahle isikhumba (ejenti ogelezayo nokumanzisa esetshenziswa) kokuzama ukulunywa iqhubeka. Asikho isidingo ukukhuthazelela izimpawu ubuhlungu - udinga ukusebenzisa kudokotela ngokushesha lapho eside imilenze silume ngezansi ngamadolo. ukwelashwa lochwepheshe bezokwelapha aqede imbangela futhi uqede ubuhlungu.
Okunye imiphumela emibi:
-nervnye nokuphazamiseka engqondweni;
isikhumba -giperchuvstvitelnaya (ukoma ngokweqile).
Siza izimpawu zokugeza herbal ngesisekelo anti-izitshalo (chamomile, ngokulandelana, burdock izimpande, burdock izimbali). Esikhundleni itiye isiphuzo lemon namafutha (10 gr. Per enkomishini yamanzi). Isiphuzo has umphumela antipruritic futhi ukuzola. Khumbula: Folk zokupheka musa ukususa pathogen, kodwa kuphela izimpawu okwesikhashana. Ngakho sasisuke, kungani emibi imilenze ngezansi kwamadolo. Sithemba ukuthi ulwazi olunikeziwe kuzosiza empilweni.
Indlela amanga esibhedlela ngiphethwe i-pneumonia, umuntu omdala noma ingane?
Ziyini izimpawu sinusitis? ekwelapheni lesi sifo
Typhus - isifo ngetimphi nengucuko
Yini badunyiswa izikhathi ezahlukene futhi abantu